के चीनले नेपालमा नाकाबन्द गरेकाे हाे ? राजदुत यान्छीको जवाफ | Ekata News
काठमाडाैं – चीनले नेपालसँगको कनेक्टिभिटीलाई सदैव उच्च महत्व दिएको भन्दै नेपाललाई आवश्यक पर्ने सबै उपभोग्य वस्तु तथा अन्य सामग्रीको ढुवानी सुचारु राख्न यथाशीघ्र प्रयास गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ ।
चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले कान्तिपुरसँगको अन्तरवार्तामा चीनले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्ने भन्ने कुरा इतिहासमा कहिल्यै पनि नभएको र अहिले पनि नभएको बताएकी छिन् । उनले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेकी छिन्–केही शक्तिले समयसमयमा तथाकथित चिनियाँ नाकाबन्दी को कुरालाई चर्चामा ल्याउने गरेका छन् ।
‘मैले यहाँ जोड दिएर भन्न चाहेको कुरा के हो भने चीनले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्ने भन्ने कुरा इतिहासमा कहिल्यै पनि भएको थिएन र अहिले पनि छैन ।’उनले भनेकी छन् ।
राजदुत यान्छी अझ थप्छिन् ‘भविष्यमा पनि हुनेछैन । हामी नेपाली पक्षसँग संयुक्त प्रयास गरी सीमा नाकाको कार्य अवस्थाको सुधार गर्न चाहन्छौं ।’
खासमा भएको के थियो ?
कोरोनाका कारण लामो समय बन्द भएर एकतर्फीरुपमा पुनः सञ्चालनमा आएका दुवै नाका ल्होसारका कारण बन्द हुँदा नेपालमा हुँदै आएको आयात ठप्प भएको छ। चिनियाँ ल्होसारका कारण बिहीबारबाट रसुवागढी नाका बन्द भएको हो । केरुङमा रहेका कामदार ल्होसार मनाउन गएपछि नेपालमा हुने आयात रोकिएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए।
नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा पर्ने मितेरी पुल मर्मतका कारण २० दिन बन्द भएर पुनः सञ्चालनमा आएको तातोपानी नाका ल्होसारका कारण फेरी बन्द भएको छ । गत माघ ८ गतेदेखि बन्द नाका माघ २७ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । पुनः सञ्चालनमा आएको दुई दिनपछि चिनियाँ कामदार ल्होसार मनाउन जाँदा गत शुक्रबारबाट उक्त नाका बन्द भएको छ ।
फागुन ५ गतेसम्म नाका बन्द हुन सक्ने जानकारी आएको तातोपानी भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मितेरी पुलको मर्मत पछि दुई दिनमा १४ कन्टेनर नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।
ल्होसार मनाएर चिनियाँ कामदार नाकामा फर्किएपछि दैनिक नेपाली ३० कन्टेनर सामान आउने जानकारी आएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष ल्होसार मनाउन चिनियाँ कामदार गाउँ फर्किदा नाका बन्द हुने गर्छ । “चिनियाँले ल्होसारलाई ठूलो चार्डपर्वका रुपमा मनाउँदा केही समय आयात रोकिएको हो, यो प्रत्येक वर्ष हुने नियमित प्रक्रिया हो”, उनले भने ।
लामो समयसम्म बन्द रहेको तातोपानी नाका पछिल्लो समय गत कात्तिक १३ गतेबाट पुनः सञ्चालनमा आएको हो । नाका पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपनि चिनियाँ पक्षको अवरोधका कारण न्यून मात्रामा तातोपानी नाकाबाट सामग्री भित्रने गरेको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।